ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတချို့ကြောင့် ဖေ့ဘွတ်ခ်မှတ်ချက်ရေးသားမှုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ စိုးပြည့်သဇင် - Cele Gabar
စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ ချစ်စရာအပြုံးချိုချိုလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ နာမည်ပျက်မရှိတဲ့အပြင် အနုပညာအလုပ်တွေကိုပဲ အချိန်ပေးရင်း ပရိသတ်အတွက်ကြိုးစားနေသူလေးမို့ အမာခံပရိသတ်အင်အားများသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ မလိုမုန်းထားသူတွေရဲ့ အပုတ်ချတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံနေရကြောင်းကို စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ မနေ့ညက ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။
“စိုးပြည့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ…fansများ..followerများအားလုံးကိုအသိပေးချင်တာလေးရှိပါတယ်ရှင့်….စိုးပြည့်ရဲ့အကောင့်ကိုcomment ပိတ်ရပါတော့မယ်ရှင့်…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့..(၆)လ၊(၇)လလောက်ကစပြီး…စိုးပြည့်ရဲ့ယခုaccမှာရော…pageမှာပါ…အကောင့်မျိုးစုံဖွင့်ပြီး..အမေ..ညီမ..မိန်းကလေးများမကြားအပ်တဲ့..မမြင်အပ်တဲ့စကားလုံးများနဲ့..commentရေးပြီး…နှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်…အဲ့ဒီထဲကမှအင်မတန်အယဉ်ကျေးဆုံးcommentများသာပြထားပါတယ်… ဒီထက်ဆိုးလွန်းတာတွေကြီးပါပဲ….ဘယ်ကစတာလဲဆိုရင်တော့… စိုးပြည့်နာမည်နဲ့ဘေလ်လိမ်ရာကနေ… fansတွေကစိုးပြည့်မဟုတ်မှန်းသိသွားပြီး….fansများနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်ကြတယ်… အဲ့ချိန်ကစလို့….accမှာရော..pageမှာပါနှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်… ဘဝမှာတခါမှတော့မကြုံခဲ့ဖူးပါဘူး…ဝေဖန်တယ်ဆိုတာအနုပညာရှင်တိုင်းကြုံတွေ့ရသလိုလက်ခံရပါတယ်… ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတော့မကြုံဖူးဘူးပေါ့နော်…ဒီပိုစ့်ကိုလည်းစိုးပြည့်မတင်ချင်ပါ….
ဒါပေမဲ့သူအကောင့်အသစ်တွေဖွင့်ပြီး ရိုင်းပျစွာmentတိုင်း စိုးပြည့်အကောင့်ထဲကမိတ်ဆွေများကို အင်မတန်အားနာမိပါတယ်…မဖတ်ဝံ့တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ရှက်ရွံ့ပါတယ်… စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိပါတယ်… ဒါပေမဲ့စိုးပြည့် မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘဲအေးဆေးစွာနေခဲ့ပါတယ်…. အမြင်မတော်တဲ့commentတွေကိုပဲ ဖျက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်….ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်လို့commentပေးသူများအတွက်comment boxကိုလည်းမပိတ်ခဲ့ပါဘူး….. ရိုင်းပျတာတွေဝင်ရေးမှာစိုးလို့blockလည်းနောက်တစ်ကောင့်နဲ့ထပ်ပြီး နှောက်ယှက်ပါတယ်… ခုပိုဆိုးတာကစိုးပြည့်ပရိုဖိုင်ပုံ.. စိုးပြည့်နာမည်တစ်ပုံစံထဲပြုလုပ်ပြီး… ပရိသတ်တွေရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာရိုင်းပျတာတွေ…ရေးသားတဲ့အတွက်…. တချို့မသိသောပရိသတ်များကစိုးပြည့်ကrpကိုရိုင်းစိုင်းစွာပြန်တယ်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာစိုးလို့.. .စိုးပြည့်comment ပိတ်လိုက်ပါပြီရှင်…. ချစ်တဲ့သူများ..follwersများကိုအလေးထားချစ်ခင်လို့ဒီစာကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်…. အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်… .ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်…စိုးပြည့်ကိုနားလည်ပေးကြပါနော် ကံ..ကံ၏အကျိုးကိုစိုးပြည့်အင်မတန်ယုံကြည်သက်ဝင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မို့ ချစ်သူ၊မုန်းသူရှိမှာ အမှန်ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက် အခုလိုအကွက်ကျကျ လိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကတော့ အင်မတန်ယုတ်ညံ့တဲ့အလုပ်တွေပါပဲနော်။ စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းကတည်းက မှတ်ချက်ပေးရေးသားကာ အားပေးလေ့ရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Comment Box ကိုပိတ်လေ့မရှိပေမယ့်လည်း အခုတော့မဖြစ်မနေပိတ်ရတော့မယ့်အကြောင်း အသိပေးမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Soe Pyae Thazin, စိုးပြည့်သဇင်, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post ခြံထဲမှာ သီးနှံပင်တွေ အများကြီးစိုက်ပျိုးထားကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
Next post ဘုန်းဘုန်းအရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ကျောင်းမှာ အာရုံဆွမ်းနဲ့နေဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ မေဦးနဲ့ ဟန်လင်း